Ka hor kulanka Manchester Derby qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Man United oo tababarka dib ugu soo laabtay… + SAWIRRO – Gool FM
Ka hor kulanka Manchester Derby qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Man United oo tababarka dib ugu soo laabtay… + SAWIRRO
(Manchester) 08 Sebt 2016 – Kulamaddii heerka caalami ee xulalka qarammada kaddib qaar ka mid ah xiddigaha Manchester United ayaa tababarka kooxda dib ugu soo laabtay, waxaana ay isku diyaarinayaan kulanka Manchester Derby ee garoonkooda Old Traffrod ku soo dhoweynayaan Man City.
Kabtan Wayne Rooney oo qeyb ka ahaa xulkiisa qaranka England ee kulamada calamiga ah ciyaarayey todobaadkan ayaa dib ugu soo laabtay xerada tababarka Man United ee Carrington, si la mid ah da’yarka Marcus Rashford oo kulankiisii ugu horeeyay ee xulka qaranka England U21 saddexleey u saxiixay.
Henrikh Mkhitaryan oo uu dhaawac ku soo gaaray waajibaadka xulka qarankiisa Armenia ayay u badan tahay in uu seego kulanka Manchester Derby, laakiin waxa uu ka mid ahaa xiddigihii tababarka Man United ku soo laabtay.
Difaaca reer Holland ee Daley Blind oo isna qeyb ka ahaa wajibaad xulkiisa qaranka Netherlands oo kulankii dhowaa barbaro la galay Sweden ayaa ku soo laabtay tababarka Red Devils, si la mid ah wiilka joogga dheer ee Zlatan Ibrahimovic oo isna qeyb ka ahaa xiddigaha tababarka ku soo laabtay kaddib fasax uu ku maqnaa.
Sidoo kale xiddigihii tababarka kooxda Man United dib ugu soo laabtay waxaa kaa mid ahaa Chris Smalling, Michael Carrick, Morgan Schneiderlin iyo xidigo kale.
Neymar oo barbareeyey Zico, kaalinta afaraadna ka soo galay gooldhalinta taariikhda xulka Brazil